UYILO LWAMAKHITSHI AMA-77 AMANJE (IGALARI YEZITHOMBE) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Uyilo lwamaKhitshi ama-77 aManje (Igalari yezithombe)
Uyilo lwamaKhitshi ama-77 aManje (Igalari yezithombe)
Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje luhlala lubonakaliswa njengesitayile esihle kakhulu, esilungelelanisiweyo kwaye esikhazimlisiweyo. Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje lulandela imigaqo emithathu ngokubanzi yesithupha: inemigca emininzi ecocekileyo, isebenzisa iinkcukacha ezincinci kunye nokuphepha ukungqubana kwalo naluphi na uhlobo.
Kumfanekiso ongentla ukudityaniswa kwezinto zendalo kunye nezinto ezenziwe ngabantu zibalulekile kwizinto zoyilo ezisetyenziswa ekhitshini langoku. Endaweni yokuhonjiswa okuvela kwiifrills, ukuhonjiswa kwinto yanamhlanje kuvela kubuhle bendalo obulula bezinto ezinje ngeglasi, i-quartz, imarble kunye neenkuni. Ingqolowa ethe tyaba yomthi ongafakwanga i-varnished okanye i-veining yemarble idlala kakuhle kwimigca ebushelelezi yekhitshi langoku. Ungazifumana zombini izinto ezenziwe ngabantu okanye zorhwebo kuyilo lwangoku. Izinto ezinje ngekhonkrithi, intsimbi, izitena kunye neenkuni ezingafakwanga i-varnished zinezinto ezinomdla ezinokuthi zisetyenziswe ngobuchule ekhitshini langoku.
Into yoyilo edla ngokusetyenziswa kwiikhikhini zale mihla kukubeka ugxininiso kwimigca emide, ebanzi, ethe tyaba kunye nomphezulu oleleyo. Kukho izinto ezinengqiqo koku njengoko imiphezulu tyaba kulula ukuyicoca nokupheka kuyo kwaye yongeza ekusebenzeni koyilo lwangoku lwekhitshi. Imigca ethe tyaba yongeza ubude kwigumbi kwaye isebenzisa imigca ethe tyaba, kuyilo lweebhodi zomgangatho, uyilo lweethayile, kunye nepateni yeedraw, iyanceda ukugxininisa ubumhlophe obupheleleyo kuyilo lwekhitshi lwanamhlanje.
Enye into yoyilo lwekhitshi lanamhlanje kukusetyenziswa kwesitayile somnyango weplati okanye isitayile somnyango kwiikhabhathi zazo. Oku kwenza indawo yokugcina ingacacanga kwaye ilula. Iikhabhathi kunye nezinye iindawo zokugcina zihlala zakhiwa ngaphakathi okanye zibekwa kufutshane neendonga neekhawuntari. Nantoni na evelayo iya kuwaphula amagumbi acocekile kwaye ayiyonxalenye yendlela yanamhlanje yekhitshi.
Iikhabhathi zekhitshi zala maxesha thanda izakhelo ezingenasiseko okanye ezigqume ngaphezulu. Apha, umnyango wekhabhathi uphelela kwikhabhinethi, yiyo loo nto xa iingcango zekhabhinethi zivaliwe isakhelo sekhabhathi sigutyungelwe ukubonakala okuhle kakhulu. Uyilo lwezinto zokugcina ekhitshini langoku lubona ukushenxiswa kweekhabhathi okanye ezinye iindawo zokugcina phezulu ezindongeni. Ikhitshi lanamhlanje lithanda indawo yokugcina kufutshane nomgangatho. Oku kunceda ukwenza ifayile ye- Uyilo oluvulekileyo loyilo lwekhitshi ukwenza indawo ibonakale inkulu.
Izixhobo zekhompyutha ezisetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi zanamhlanje zilula kwaye zilula. Insimbi engenasici, i-aluminium kunye nezinye izinyithi zale mihla zihlala zisetyenziswa kulungiso lwekhitshi kunye nezixhobo zale mihla. Njengengxenye yendlela elula yokwenza izinto ekhitshini yanamhlanje, izixhobo zombane zihlala zigcinwa kwizixhobo zesixhobo apho zinokufikeleleka ngokulula kodwa kwaye ungazidibanisi ii-countertops.
Ngenxa yokubaluleka kokuziva kungasasazwanga kwisitayile sanamhlanje sokuyilwa kwekhitshi, imibala engathathi hlangothi njengombala omnyama nomhlophe, ukhilimu kunye nomdaka zii-hues eziphambili ezisetyenziswe kolu hlobo loyilo lwekhitshi. Imibala elula, ecocekileyo inceda ngenkangeleko ebengezelelweyo ebaluleke kakhulu kuyilo lwekhitshi lwanamhlanje. Ukuba awufuni ukuhamba nemibala engathathi hlangothi, ukunamathela kwii-hues ezinemonochromatic ezinemibala embalwa yesibindi yindlela yokuhamba. Imibala yesitatimende esinesibindi inokungeniswa ekhitshini langoku ngokusebenzisa iziqwenga zokuhombisa ezinje ngomsebenzi wobugcisa, i-backdrops yangemuva okanye iiceramics ezimibalabala.
Uninzi loyilo olulula lwekhitshi lwanamhlanje lusebenzisa izinto ezigqityiweyo ezinemigangatho yokufezekisa ulondolozo olusezantsi lokuqaqamba okujongeka njengokuqhelekileyo ekhitshini yesitayile sanamhlanje. Uya kubona indlela uyilo lwekhitshi oludibanisa ngayo umhlophe kunye nomnyama grey laminate ogqityiweyo kunye neentsimbi ezilula ezingenazintsimbi kwaye zidityaniswe nezixhobo zale mihla ngokunjalo. Ukugcina ukuhambelana nesibheno esingenamthungo sekhabhathi, umphezulu omhlophe oqinileyo yayizinto ezikhethiweyo zokubala.
Le khitshi ekhangeleka njengamadoda idibanisa ingwevu emnyama nomnyama, yenza iphalethi emnyama ekhitshini elinganiswe ziindonga ezimhlophe kunye neefestile eziqaqambileyo zegumbi. Zonke iikhabhathi zilaminishwe kwigobolondo leqanda eligqityiweyo elimnyama elipeyintiweyo ukuze lihlukane ngokubonakalayo kumgangatho wekhonkrithi ongwevu. Kwi-countertop kunye ne-backsplash, isebenzisa ilitye elimnyama elimnyama elihambelana ngokufanelekileyo nobuhle bwanamhlanje bendawo.
Eli khitshi lanamhlanje lisebenzisa yonke iphalethi emhlophe-iikhabhathi ezinobumenyemenye obuphezulu kunye nezixhobo zokubala zemabhile. Ukwenza umdla ngakumbi nangona kunjalo, yongeza ezinye iipopu zemibala enjenge-backsplash ebomvu ephuculwe kukukhanyisa kwekhabhinethi engaphantsi kunye neendonga ezikhanyayo ezityheli eziphula ubumhlophe bokugqitywa okumhlophe.
Indawo enekhitshi eyahlukileyo enolwakhiwo oluyingqayizivele olujikelezwe ngokusetyenziswa kokugqitywa kwezixhobo kunye nezixhobo. Ikhawuntari yekhitshi incinci kwisimo setyhula kwaye ilaminishwe emhlophe. Itafile isebenzisa umphezulu omhlophe oqinileyo ukutshatisa iikhabhathi ngelixa izitulo ezi-3 zibekwe ngaphambili ukuvumela abaphulaphuli ekhitshini.
Le khitshi yanamhlanje isenza ngezinto zokugqiba iinkuni ukuyinika ukubonakala kwendalo kunye nokuvela kwendalo. I-laminate yokukhetha iikhabhathi zasekhitshini ikumbala wePine ohambelana nombala kunye neethoni yemigangatho eqinileyo yomthi. Itafile yegranite emnyama inceda ukongeza umahluko kwiskimu sekhitshi, ngelixa iindonga ezimhlophe zinceda ithoni yeethoni ezityheli zomthi zigqityiwe.
Izipho zokukhumbula umtshato kuye zonyaka omnye
Ubuhle abuhlali benziwa amadini xa ukhetha ikhitshi yesitayile sanamhlanje, njengalo mzekelo uthandekayo. I-Oak emnyama yokugqiba i-laminates yambethe iikhabhathi zasekhitshini ngetafile yokukhanya emnyama emnyama, eyenzela uyilo lwekhitshi olucekeceke nolwanamhla olusenomtsalane ofudumeleyo nenhle weekhitshi zakudala.
Uyilo lwekhitshi lwenza ingxelo eqinileyo ngokusetyenziswa kweekhabhathi ezinobukhazikhazi obuphuzi obuqaqambileyo. Ukugqitywa okuphezulu kwekhabhinethi kubonakala kwiindawo ezahlukeneyo zegumbi, okwenza ikhitshi ibonakale iluhlaza. Izinto zokubala ezimnyama zomphezulu womhlaba zibonelela ngumahluko omhle kwithoni etyheli ezantsi, ngelixa ukukhanya kwe-beige backsplash kunye neengcango zeglasi kunceda ukongeza ubume ngakumbi kunye nokwahluka ngokugqitywa kwayo.
Iimpawu zekhitshi zale mihla iikhabhathi ze-acrylic beige ngetafile emhlophe ye-quartz kunye ne-porcelain tile efana nomthi. Isiqithi sasekhitshini esineesinki ezimbini zokuhlambela zibonelela ngendawo entle yokulungiselela ukutya kwaye ilungile ukugcina iso ebantwaneni okanye ukonwabisa ngelixa usekhitshini.
Olu luyilo oluhle lwangoku lwekhitshi olusebenzisa ii-laminates ezithandekayo zeZebrawood kwiikhabhathi zaso zasekhitshini ngokudibanisa negranite emnyama ebengezelelweyo. Imiphezulu yeetafile idibana kakuhle nodonga lwepantry / udonga lwe-oveni olusebenzisa ii-laminates ezimnyama eziphezulu kunye nezixhobo ezimnyama.
Eli khitshi lincinci lenyusa ukusetyenziswa kodonga ngokulisebenzisa njengodonga lokugcina olupheleleyo kunye nezixhobo ezakhelweyo. Inexande elikhulu Isiqithi sanamhlanje sekhitshi ngomthi okhethekileyo wokugqiba i-laminate kunye ne-bar counter ephezulu egqunywe nge-laminate emnyama ebengezelayo. Iikhabhathi zangasemva zilaminishwe ngombala we-beige okhanyayo, okwenza ukuba indawo ibonakale ikhanya ngakumbi.
Eli khitshi linokucoceka okucocekileyo kunye nokucoceka okumhlophe okugqityiweyo kweekhabhathi kunye nomgangatho. Imiphezulu yeetafile zegranite ezimnyama kunye nezixhobo zekhitshi ezingenazintsimbi zongeza umahluko kunye nokudlidliza kwisikimu sombala esimhlophe esijongeka sicocekile.
Ezi zimbini zekhitshi yanamhlanje zibonisa iikhabhathi ezimhlophe ze-acrylic ezidityaniswe nekhabhathi emdaka yeenkozo zelaminate. Isiqithi esinde sekhitshi esinendawo yokupheka kunye nesidlo sakusasa sisebenza kakuhle ekutyeni nasekulungiseleleni isidlo ngelixa ujongene nosapho kunye nemibuzo.
Le yikhitshi yodidi enesikimu sombala omdaka namhlophe. Iikhabhathi ezingaphezulu kunye nezitulo zebar zesiqithi sekhitshi zikwisiphelo esimhlophe esimhlophe esimenyezelayo. Ikhitshi likhanyiselwe ngokukhanya okukhanyayo, okuhle, kunye nokukhanya oku-pendant oku-4 okulele ngqo ngaphezulu kwesiqithi sekhitshi. Imiphezulu yeetafile zelitye ezimdaka zilala phezu kweekhabhathi ezinombala omdaka ngokuqinileyo. Izixhobo zasekhitshini ekugqityweni kwealuminium kunye nekhethini enkulu yensimbi emnyama isetyenziselwa ukongeza iklasi kumbala oqinileyo wendawo.
Eli likhitshi langoku elilawulwa yikhabhathi yomthi elaminethiweyo kunye nomphetho wokugqitywa kwealuminium. Ukugqitywa ngokuthe tye kwaye phantse kuyindoda kwenziwa ngobuqhetseba ngezibane ze-cove ezimfusa phantsi kweekhabhathi kunye neembiza ezinombala ofanayo wezityalo zokuhombisa, ezenza ukuba indawo ingathathi cala ngokwesini kwaye inomdla.
Oku kucocekile kwaye kulula ikhitshi elimhlophe namhlophe ilawulwa ziikhabhathi kugqitywe okwenziwe ngombala omdaka ngombala kunye nemiphezulu yeetafile emhlophe kunye neendonga ezimhlophe kunye nophahla olumhlophe. I-lackluster ilinganiswe nezixhobo zekhitshi ezingenasici, abaququzeleli kunye nabaphathi bekhabhinethi.
Eli khitshi elinombala omhlophe ogqityiweyo omhlophe kuzo zonke iikhabhathi zalo ezingenamthungo. Isitulo esimhlophe esimenyezelayo esiqithini sekhitshi kunye nophahla olumhlophe kunye neendonga zihambelana ncam nalo mbala. Abamhlophe banxityiswa kukugqitywa ngentsimbi engenasici kwizixhobo zasekhitshini kunye nezibane ezi-4 ezijingayo ezixhonywe ngqo phezu kwelitye elimnyama eligubungele isiqithi sekhitshi. Yonke into ebengezelayo ekhitshini ilinganiswe ngumgangatho wokhuni lwe-matte.
Eli khitshi lanamhlanje linombala ompunga, oluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama nomhlophe ovelisa ngokugqibeleleyo ubudoda obulungeleleneyo kwindawo yasekhitshini. Iindonga kunye nophahla zikwimeko efanayo yokugaya matte engathi yenziwa ziithayile eziluhlaza okwesibhakabhaka ze-backsplash. Ezi tile eziluhlaza eziluhlaza zihambelana nekhabhathi ekhanyayo eluhlaza ngaphezulu. Isiqithi sekhitshi sesimanje ngokukhethekileyo kunye ne-aluminium kunye nokugqitywa okumnyama okumnyama.
Leli khitshi elihle lijikelezwe ngamacwecwe omthi omnyama ogqityiweyo ngaphezulu kunye nesiseko sekhabhathi ezingenamthungo, ezinezinto zentsimbi ezingenazintsimbi ezihambelana ne-oveni kunye nezixhobo ezibonisiweyo ngokugqibeleleyo. Ikhitshi lenziwe labanzi ngokungabikho kwesiqithi sekhitshi.
Eli khitshi licocekile kwaye liqaqambile ngokukhanya okungaka okuboniswa ngumbala omhlophe weendonga, isilingi, i-flooring, i-laminates eqinileyo kwikhabhathi, kunye ne-countertop emhlophe emhlophe kwisiqithi sekhitshi eside. Umoya ococekileyo oqaqambileyo wenziwa ekhaya kunye nesiqithi sase-mahogany sekhitshi kunye nezitulo ezilukiweyo.
Le khitshi yanamhlanje inemibala emnyama nemhlophe elawula indawo. Iindonga, iisilingi, kunye ne-backsplash zikwimhlophe eqinileyo ngelixa ikhabethe kunye neetafile zikwilaminates emnyama eqinileyo enombala omenyezelayo kunye nomatte. Imiphetho ebukhali yekhawuntala yekhitshi ihambelana ngokugqibeleleyo nesibane esibomvu sejiyometri esongeza umbala kwi-monochrome.
Leli khitshi elilula nelala maxesha lilandela isikimu sombala oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe. Zonke iikhabhathi zingenamthungo zinamacwecwe amhlophe acwebezelayo ngelixa elinye elikwikona lasekunene linomphezulu oguqukayo owenziwe ngesigqubuthelo esinekhephu. Abamhlophe bathelekiswa ngeendonga zasebukhosini eziluhlaza kunye nokukhanya okuluhlaza okuluhlaza okwenziwe ngombala kwi-countertop.
Eli khitshi libukekayo lidala indawo engaphezulu ngeendonga ezimhlophe kunye neelaminithi ezimhlophe ezimenyezelayo eludongeni ezixhonywe iikhabhathi ezingenamthungo. Njengamakhabhathi, ii-oveni zibekwe eludongeni nazo. Isiqithi sekhitshi sigqibile ukucwenga ngegranite ngesinki engenazintsimbi, njengezikhanyiso ezithathu ezingenantambo ngaphezulu kwazo. I-oki yomthi i-laminates efumaneka eludongeni lwasekunene, kunye nesityalo esinebhotile ende, yongeza ukuziva ekhaya kwindawo.
Eli khitshi libanzi linomxube olungileyo wobugcisa kunye nobuhle. Ikhabhathi ye-Wengue ijikeleze ikhitshi ngezixhobo zesinyithi ezihambelana nokugqitywa kwesinyithi esingenasici se-oveni kwelinye icala. Imigangatho ekhonkrithi yomthunzi okhanyayo we-mahogany unokufunyanwa kwisiphelo somgangatho omenyezelayo kwaye ukuchukumisa kombala kuyaqhubeka kwizibane ezijikeleziweyo. Izibane ezixhonyiweyo zilele ngaphezulu kwesiqithi sekhitshi esine-aluminium ephezulu kunye ne-matte grey laminates kwisiseko.
Eli likhitshi elinekhaya elinamafestile amakhulu anikezela ngombono wokuphumla wegadi ngaphandle. Iikhabhathi zikwi-matte oak laminates yeplanga, kunye nokugqitywa kwelitye elimnyama kwii-countertops. Ukugqitywa kwe-mahogany glossy yomgangatho wongeza ubumnandi kwisithuba.
Eli khitshi linika imvakalelo yekhaya kunye necocekileyo exutywe noyilo lwangoku. Zonke iikhabhathi zikwi-laminates ezimdaka ngebala kunye nezibambo zentsimbi engenasici. Elinye igumbi; i-backsplash, isilingi, iindonga, kunye neetafile, zikwisiphelo esimhlophe esimhlophe.
Le yikhitshi entle yanamhlanje elandela umbala omnyama nomhlophe. Isilingi netafile zimhlophe, ngomqolo kunye nodonga kugqunywe iithayile ezincinci ezimhlophe. Umgangatho unesiphelo se-oatmeal. Le mibala ikhanyayo ithelekiswa nezitulo ezimnyama kunye neekhabethe ze-wengue ezinezibambo zentsimbi engenasici kunye nezibane ezongeza ubukhaphukhaphu kwisithuba.
Eli likhitshi lanamhlanje elineekhabhathi ezicacileyo neziqinileyo zeewine zeekhabhathi. Umbala omnyama uthelekiswa neendonga ezimhlophe kunye nophahla. Amagqabantshintshi angaqondakaliyo kunye nobuchule obunokubonwa kumgangatho, ngesiqingatha kugqitywe ngokhuni kwaye esinye isiqingatha sineethayile ezimdaka ngebala. Uyilo olungqalileyo lulungelelaniswe ziipateni eziluhlaza eziluhlaza ezinokufunyanwa kwi-backsplash, umbala ohambelana neglasi ephezulu ngaphezulu kwesiqithi sekhitshi.
Le yikhitshi ecocekileyo neyala maxesha emhlophe yonke. Umbala omhlophe, odityaniswe nesiqithi sasekhitshini eside kunye nekhabhathi, wenza ukukhanya okungakumbi. Izitulo zikwanalo uyilo olumhlophe olukiweyo kunye neenyawo zealuminium ezihambelana neziko le-oveni kunye nesinki.
Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje lulungelelene kakuhle, ngombala omnyama nomhlophe ngombala ngokwahluka okucwebezelayo kunye nematte. Zimbini izakhelo zekhabhathi ezingaphezulu ezinomphetho omenyezelayo omnyama emazantsi kunye nokugqibezela okumhlophe okuphezulu ngaphezulu. Ukugqitywa komnyama oqinileyo ezishelfini nako kunokubonwa kubekwe kudonga olumhlophe. I-countertop enemilo e-o ine-oak wood laminate finish. Elinye icala lekhawuntala yasekhitshini lisebenza njengendawo yokupheka, apho isinki inokufunyanwa khona kanye ecaleni kwento ebuyayo ebengezelayo enomfanekiso wobusuku obumnandi wezakhiwo ezide. Elinye icala sisiqingatha somthi we-oki kunye nesiqingatha esimnyama esimnyama esimnyama esisebenza njengetafile yezitulo ezimhlophe ezibengezelayo ezimnyama ezinento yokwenza nezinto ezimnyama.
Indawo yanamhlanje yekhitshi ikhupha i-vibe yanamhlanje kunye neekhabhathi zayo ezimnyama ezingenamthungo. Ukuphuculwa kwempucuko kunye nokukhanya kunikezelwa zizibane zeblue blue ezibekwe phantsi kwetafile emnyama ende eqinileyo, kanye ngaphezulu kweekhabhathi ezisekhohlo kwicala lasekhohlo. Isiqithi sasekhitshini sinombala ofanayo kunye nesitayile, kwaye sibonelela ngendawo yokunqunqa kunye nokutya ngokuzonwabisa, kunye nomabonakude obekwe eludongeni ekupheleni kwawo. I-flooring isecaleni elincinci le-wengue eligqibeleleyo, eliqhathaniswa neendonga ezimhlophe kunye neesilingi.
Eli likhitshi langoku elinendawo emhlophe yegolide kunye neepecan. Iikhabhathi ezingaphezulu ezingenamthungo zikwisiphelo esimhlophe esimenyezelayo, ngokuchaseneyo nekhabhathi ezisisiseko zegolide ezilingana neebhentshi ze concave eziphantsi kwendawo engenamngxunya esebenza njengetafile kwisiqithi sekhitshi. Isithuba sigcinwa sivulekile ngefestile enkulu kwelinye icala kunye nodonga olunemingxuma emikhulu yoxande kwelinye icala, ejonge yonke indlu.
Le yikhitshi yanamhlanje ene-femu vibe. Iindonga zikwisiphelo esimhlophe esimhlophe esimhlophe, kunye nesiqingatha samacala asekoneni kwisiphelo esibomvu se-matte. Iikhabhathi ezisisiseko zenza i-L emile ene-matte emnyama eqinileyo emacaleni emacaleni angaphandle kunye namabala amdaka abomvu kwiikhabhathi ezikwikona engaphakathi. Ukukhanya okumhlophe okuxande kunye neepateni ezimnyama ezi-swirly kungafunyanwa kubekwe ngaphezulu kwe-backsplash, kongeza ubomi kwimate kunye nemibala eqinileyo egumbini.
Leli khitshi lasekhaya livulekile kakhulu kunye neefestile ezinkulu ezibheke ngaphandle ngaphandle kwekhawuntala yekhitshi nakwicala lasekunene lodonga. Ukukhanya okungakumbi kubonakala ngaphakathi ngophahla olumhlophe kunye neendonga. Iikhabhathi ezingaphezulu zigqunywe ngeglasi enengqele kwaye zithelekisa iikhabhathi zesiseko seenkuni ezininzi.
Eli khitshi libanzi lijikelezwe ziikhabhathi ezimhlophe ezifakwe iplanethi emhlophe kunye neetafile ezinamabala phakathi. Isiqithi esisembindini sigutyungelwe sisahluli eside esisebenza njengesiseko setafile emile ngokungaqhelekanga yeL kunye nokugqitywa kwelitye elimhlophe.
iikhabhathi ezimhlophe zoxinzelelo
Le khitshi yanamhlanje ilula ngeplanga emnyama enamabala angaphezulu angenamthungo kunye nekhabhathi ezisisiseko. Umphezulu wekhawuntari ukwimo engqwabalala kunye nomphezulu wamatye ohambelana nombala weekhabhathi. Ukufana ngombala kugqityiwe kukugqitywa kwentsimbi engenasiphelo kwizibane zependant kunye nesinki.
Eli likhitshi eliphangaleleyo nelivulekileyo elineewindows ezitsala amehlo eluphahleni, ezisebenza njengomthombo wokukhanya kwendalo. Iikhabhathi ezingenamthungo zezala maxesha zinee-laminates zomthi oqinileyo we-cherry kwindawo ekumgangatho oqinileyo emhlophe kunye ne-backsplash. Iitafile, udonga, kunye nophahla nazo zimhlophe, kwaye zivuselelwa kukugqitywa kwealuminium kwizitulo nakwi-oveni.
Le yindawo entle yasekhitshini ene-vibe yanamhlanje. Iikhabhathi ezingaphezulu kunye nezisisiseko ezingenamthungo zinokugqitywa okumhlophe okuqaqambileyo okuhambelana nokubuyela umva okumhlophe, iindonga kunye nophahla. Oku kujongane nesiqithi sasekhitshini esijikeleze ngokukodwa kwelinye icala, sincoma isofa engqukuva yesiqingatha egreyini nakwimnyama emnyama ecaleni kweefestile ezijonge umbono ongaphandle.
Eli likhitshi lanamhlanje elinesiqithi somthi wom-oki esimenyezelayo esifana nekhabhathi ezingashukumiyo. Iikhabhathi zeenkuni zom-oki zine-countertop emnyama eqinileyo ethelekiswa nokugqitywa okumhlophe okumhlophe kwi-backsplash nangaphezulu iikhabhathi ezingenamthungo. Ukuchukumisa okungaphezulu komnyama kunokubonwa kulungelelwaniso lokukhanya olune-pendant ezintathu kunye nekhabhathi yewayini egqunywe ngeglasi emnyama.
Oku kuhle kwaye kuyasebenza Uyilo lwekhitshi yanamhlanje leyo yandisa ubungakanani bayo noluhlu oluqhubekayo lweekhabhathi ezisisiseko kwi-wengue enamabala okugqibela e-laminate. Iikhabhathi ezingaphezulu zinombala ofanayo, kunye nokufana okuthe kratya okugqityiweyo kukugqitywa kokugqitywa kwealuminium kweziphatho ezihambelana nokugqibezela okungwevu okuqaqambileyo kwii-countertops.
Le ndawo yekhitshi idibanisa ngokugqibeleleyo ubuhle kunye nexesha langoku. Isiqithi sasekhitshini sinendawo yokupheka yokufaka ngaphakathi kunye nesinki, enezityalo zokuhombisa kwiimbiza ezimhlophe ezihambelana nesiseko esimhlophe. Umphezulu kunye namacala esiqithi sase khitshini sisegreyini eqinileyo engwevu, umbala wayo okhanyayo uthelekiswa netafile emenyezelayo emnyama yayisofa kunye nendawo yokutyela nayo inokubonwa.
Olu luyilo lwangoku lwasekhitshini lwesiqhelo lusebenzisa iipleyiti zomthi kwiikhabhathi zalo, ezinomthi oqinileyo wokubala umbala oatmeal ohambelana Isiqithi sasekhitshini kunye nebala lezitulo ’umbala. Ngaphandle kokuba yitafile yezitulo zebar, isiqithi sekhitshi senziwa sisebenze ngakumbi ngokubamba isitovu. Iindonga ezimhlophe ziphantse zingabonakali ngeefestile ezinkulu ezijonga ngaphandle, zenza indawo evulekileyo kakhulu.
Le khitshi yanamhlanje ilula kakhulu kwaye ilula ngeekhabhathi ezingenamthungo kwisiphelo esimenyezelayo. Umbala wokukhanya uthelekiswa nesiseko esimnyama kunye neziphatho. Igumbi likhanyiswe kakuhle ngakumbi ngokugqitywa okumhlophe okuhonjisiweyo komgangatho kunye neendonga ezimhlophe kunye nophahla.
Le yikhitshi elincinci nelinamhlanje elisebenzisa ukugqiba okumhlophe okukhanyayo kwiikhabhathi, ezigqityiweyo ngokugqitywa kweenkuni ze-mahagony kwitafile, kwi-countertop nakwimigangatho. Izitulo zebharu ezimfusa kunye ne-backsplash zenza ukuba indawo ibe yeyesifazana kwaye ibe namandla.
Le khitshi yanamhlanje ijikelezwe ziikhabhathi ezingenamthungo, izitulo neengcango ezinombala omhlophe oqaqambileyo. Oku kuhambelana nophahla olumhlophe kunye nokubuyela umva, okuthelekiswa namanqwanqwa amatye amnyama egumbini. Isibuko esisecaleni kwesiqithi sekhitshi senza ukukholelwa kwendawo engaphezulu.
Le khitshi yanamhlanje ijikelezwe ziikhabhathi ezinkulu kumthi omnyama wepine laminates, njengesiseko sesiqithi sasekhitshini. Ukugqitywa kweenkuni kulungelelaniswe ngamatye amhlophe amhlophe kunye neetafile ezimhlophe ezimhlophe. Umtsalane ophambili kule ndawo yasekhitshini ngumbono omuhle wechibi elingaphandle kwefestile.
Eli likhitshi elihle neliphangaleleyo eline-L emile okweqanda ekumnyama okugqityiweyo okuhambelana nomthi we-wengue kwiikhabhathi ezingaphezulu kunye neesiseko, umbala ofanayo okwisiqithi sasekhitshini. I-backsplash eneethayile yokugqiba ilitye le-matte ihambelana ngokupheleleyo neethayile zomgangatho. Izityalo zibekwe kwindawo yonke ekhitshini, zenza imvakalelo yokwamkela ngakumbi.
Le khitshi yanamhlanje inokugqitywa kweenkuni kakhulu ngenxa yeebony zayo ezixhonyiweyo kunye neekhabhathi ezisisiseko kunye nomgangatho. Ubume obufanayo busetyenziselwa ukwahlula okumhlophe okungafaniyo. Ubunzima obunzima kwigumbi lilinganiswe ngeendonga ezimhlophe ezimhlophe kunye ne-laminate emnyama eqinileyo ebomvu kwi-countertop.
Oku ikhitshi elincinci elineekhabhathi zomthi ezimnyama ifaka ukugqitywa komthi we-matte laminate ngemigca ethe tyaba ngokuhluka kunye nokuthelekisa imibala emdaka. Iikhabhathi ezimnyama ubukhulu becala zihambelana nokugqitywa kwelitye elimnyama kwindawo esecaleni kwaye kuthelekiswa nokugqitywa kokukhanya kwe-matte taupe kwiindonga zomgangatho kunye nomhlophe. Grey izitulo zebar zejometri kunye nezibane zensimbi ezingenasici ezongeza ubuhle kunye nobuchule kule khitshi yanamhlanje.
Le yikhitshi elincinci nelithandekayo lale mihla elinombala obomvu ogqityiweyo kwiikhabhathi kunye ne-matte emhlophe emhlophe yokujonga phezulu. Izibambo zensimbi ezingenasici kunye ne-oveni zongeza ubumenyemenye kwi-mattes, kwaye isiqithi sasekhitshini siyi-eye-catcher enesimo setyhula kunye nomaleko kabini. Isitovu esinyusiweyo senza ukuba indawo ibonakale idlala, njengeziko lolawulo ekhitshini.
Le khitshi yanamhlanje ivelisa i-vibe yeklasikhi ngombala wayo. Isimbo esi-rosy kwizitulo zebar kunye neekhabhathi zithelekisa ukukhanya kwe-oatmeal imibala yeekhabhathi ezingenamthungo kunye ne-countertop emhlophe eqinileyo. Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje luyaziwa ngokugqitywa kwesinyithi esingenasinxibe kwaye esi sithuba siyayifanela le patheni. Iikhabhathi zentloko yeglasi kunye nokugqitywa kwentsimbi engenasici kwiziphatho zekhabinethi kunye neenyawo zenyawo zentsimbi zongeza isandi kwisikimu esimalunga ne-monochromatic.
Oku ikhitshi emhlophe yanamhlanje Isebenzisa umbala omdaka, mhlophe, ngwevu ukwenza imvakalelo yanamhlanje kunye nekhaya. Iindonga ezimhlophe kunye nesiseko sesiqithi sekhitshi sinemigca engwevu apha ngezantsi, ehambelana nokugqitywa kwentsimbi engenasici kwi-oveni enyusiweyo nakwisitulo sebha. Umthi wom-oki omnyama ucocekile ubonakala kwiikhabhathi ezingaphezulu, ezishelfini, nakwiitafile, umdlalo ofanelekileyo kwindawo yokugcina izinto esitofini kunye nokukhanya Umthi weplanga .
iofisi yasekhaya yakhiwe ngaphakathi
iikhabhathi zekhitshi ezenziwe ngerustic